Akuko banyere mmemme, ihe oru di nkpa iji mee ka ndi mmadu mara oru
Arịrịọ maka mmụba ụgwọ ọnwa site na email
Akwụkwọ edemede: kpughee ego ndị ọrụ gị
Akwụkwọ ozi ederede: rịọ ka a kwụọ ụgwọ mmefu ...
Akwụkwọ ozi ụdị ịrịọ ugwo nke ya ọ ...
Ahapụ maka azụmahịa e kere eke, ndebiri nke leta nke ...
Ọrụ Google, ma ọ bụ ka esi ama ihe niile gbasara mmemme gị...
Ederede Email iji rịọ mgbaghara maka onye kachasị elu ...
Ịla ezumike nká na-aga n'ihu na-agbatị ruo ndị ọrụ ọnụ ahịa dị ọnụ ala ...
Gbanahụ Ọdịmma Gị - Chebe Onwe Gị N'adịghị mma ...
Mmepe onwe onye
Asụsụ mba ọzọ
Mmekọrịta onye ọ bụla
Bido ma rụọ ọrụ na France
Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Edere site Tranquillus | Apr 11, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
I zubere itinye akwụkwọ maka ego, ọzụzụ ma ọ bụ ụtụ ego maka ụgwọ ọrụ. Tupu ịmalite ime ihe, mee ihe ọ bụla ịchọrọ iji kọwaa ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eme okpukpu abụọ karịa nke ndị ọzọ, mana ọ dịghị onye maara banyere ya. Na-egbu oge gị, ị kwesịrị ị na-atụle ide akụkọ kwa ụbọchị.
Kedu ihe bụ akụkọ mmemme kwa ụbọchị maka?
N’ime oge ijide ihe, ịnwere ike ịnwe kọntara ọnụ na ndị isi gị. Enwere ike ịmanye gị dochie onye ọrụ ibe gị ma ọ bụ onye nlekọta gị. Ide akwụkwọ akụkọ gbasara ọrụ ụbọchị ọ bụla ga-enye nkọwa doro anya banyere ọrụ gị. Onye (ndị) dị n’aka na-elekọta gị nwere ike iji akwụkwọ a mee mkpebi ha. Zinghazi ọrụ gị ga-adịrị gị mfe. Ọ bụrụ na onye isi gị maara ihe ị na-eme na ihe ị na-eme ime. Otu nwere ike iche n’echiche na ozi ndị a ma ọ bụ kpọọ ekwentị ya agaghị na-ewute gị.
Kedu ozi a ga-abanye na akụkọ mmemme ya?
Ọ bụ ajụjụ iweta ihe niile dị mkpa, ozi niile nke na-eme ka enwere ike ịtụle ọrụ niile a na-eme n’ụbọchị. Ọrụ a rụrụ, ọrụ ahụ ezubere, nsogbu ndị ọ zutere yana ndị nke edozi. Ọ ga-enyere gị aka, dịka ndị ọzọ metụtara omume gị, ka ị gaa n'ụzọ ziri ezi. Onye ọ bụla ma ihe na-eme, ma ọ bụrụ na ọ ga-eme, anyị adịghị ebugharị na nsogbu. Y’oburu na ino n’uzo, anyi ga-ekele gi, ma oburu na i ezighi ezi, anyi ga agwa gi ozugbo. O nweghi onye ga - eweghara ọrụ gị. Ihe odide a nwekwara ike ịbụ ihe ndabere maka ajụjụ ọnụ gị kwa afọ, dịka ọmụmaatụ.
GỤỌ Kedu ka esi melite ogo ederede gị na ọrụ?
Ihe Nlereanya nke akụkọ kwa ụbọchị nọmba 1
N'ihe atụ nke mbụ a, otu onye isi otu na-eme ka onye nlekọta ya mara ọnọdụ ọrụ. Ya onwe ya tọrọ atọ n'ụlọ 15 ụbọchị. Kwa ụbọchị ọ na-ezigara ya ozi ịntanetị na njedebe nke ụbọchị. Na nzaghachi ya, onye ndu ya gwara ya emehie iji zere ya na ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu ụfọdụ.
Isiokwu: Akụkọ mmemme nke 15/04/2020
Ngwá ọrụ na njikwa ngwaahịa
Ijikwa usoro ihe omume
Zọ site na saịtị gaa na saịtị iji lelee nrube isi na usoro covid19
Njikwa ihe omume
Njikwa ozi na ekwentị
Ọrụ na-aga n'ihu
Ọzụzụ na ntule nke ndị ọrụ ọhụụ
Ilekọta ebe obibi na akụrụngwa nhicha
Na-eme atụmatụ ụzọ ọhụrụ na ịhazi ụgbọ ala
Ntinye akwukwo ohuru maka inye ndi ahia ahia
Nkwukọrịta nke malfunctions na njikwa
Ichetara ndị otu nchekwa na iwu nchekwa
Nnata nke ngwaahịa ngwaahịa na iwu ọhụrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Kwụ ụgwọ nnyefe ihe
Ndozi ebe a na adọba ụgbọala na mkpofu otu abụọ
Nzuko ndi isi otu ato
Ihe nlele nke akwukwo ozi nke abuo 2
N’ihe atụ nke abụọ a, Fabrice, nwoke na-ebubata ozi na mpaghara Paris, na-eziga akụkọ kwa ụbọchị onye isi ọhụụ ya. A na-atụ anya na ọ ga-eziga akụkọ a maka abalị abụọ. Na njedebe nke oge a, a ga-enwe mkparịta ụka ọhụrụ n'etiti ha iji kọwaa ebe ọrụ ọhụụ. Na nchekwube, nkwado nke onye isi ya ọhụụ maka ego.
GỤỌ Mbara ndepụta na readability
Nlekọta ụgbọala: nlele, nrụgide taya, mgbanwe mmanụ
COVID19 nzukọ ozi ahụike
Nhazi nke njem njegharị
Ibu ụzọ mee nkwadebe
Frompụ n'ụlọ nkwakọba ihe na 9:30 am
Nyefee ngwugwu n'ụlọ ndị ahịa: 15 nnyefe
Laghachi n'ụlọ nkwakọba ihe na 17 elekere anya.
Chekwa ngwugwu ndị a na-etinyeghị na ya na nzacha nke ndetu ndụmọdụ nyefe na ọfịs
nhazi nke mkpesa ndị ahịa, jụrụ ma ọ bụ mebiri emebi ngwongwo
Ndị otu ya na-ehicha ihe na ntinye
Ihe nlele nke akwukwo ozi nke abuo 3
Maka ihe atụ nke ikpeazụ a, kọmputa kọmputa na-emezigharị ihe niile na-eme ka onye ọzọ mara ọrụ ya. Site na ịkọwa ọrụ a na-arụ n'ụlọ yana nke onye ahịa. Enweghị nsogbu ọ bụla, ọrụ ahụ na-aga n'ihu n'oge ọ bụla n'agbanyeghị oge a ga-ejide ya.
9:30 nke ụtụtụ - 10:30 am aLỌ
Ajụjụ ọnụ nke Guillaume iji ghọta nke ọma ihe anyị ga-enye ụlọ ọrụ XXXXXXXX.
Ftdọrọ na ịbanye na ọrụ ndị ahịa nke atụmatụ izizi zuru ezu.
10:30 nke ụtụtụ - 11:30 am HLỌ
Mbido akwụkwọ maka inye ndị ọrụ ọzụzụ nwa oge.
11:30 nke ụtụtụ - 13:00 pm TRAVEL
Nhazi nhazi netwọdi na nchekwa maka ụlọ ọrụ XXXXXXXXXX.
Ntinye nke ngwanrọ telecommuting.
14 elekere - 18 pm OMLỌ
12 ndị ahịa na-arụzi ọrụ ha.
Nyefe oku maka ntinye aka na saịtị ahụ.
Akuko banyere mmemme, ihe oru di nkpa iji mee ka ndi mmadu mara oru Eprel 25, 2020Tranquillus
gara agaMụta inwe obi uto na SKILLEOS, ikpo okwu e-mmụta
-esonụKpụrụ ọma kachasị mma maka ozi ịntanetị gị
Ihe ndị yiri ya
Mma gị mkpoputa larịị na video
Okwu ọma ịzenarị na email ọkachamara
Nzukọ nzipu ozi email
Usoro nkwanye ugwu a ga-eji na prọfesọ ma ọ bụ onye nkuzi
ederede ederede na onu - nkuzi n’efu (19) nri (204) Ọzụzụ onwe onye na nke ọkachamara na-akwụghị ụgwọ (51) Freezụ ahịa achụmnta ego n'efu (94) Ọzụzụ n'efu Excel (33) Ọzụzụ ọkachamara (112) njikwa ọrụ n'efu ọzụzụ (17) asụsụ mba ọzọ ọzụzụ n'efu (9) Languagezọ asụsụ mba ọzọ na ndụmọdụ (22) Software na ngwa free ọzụzụ (23) Ụdị akwụkwọ ozi (20) ala (203) google ngwaọrụ n'efu ọzụzụ (14) Ọzụzụ PowerPoint n'efu (13) Ọzụzụ webmarketing n'efu (75) Ọzụzụ n'efu okwu (13)
Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Iwu Cookies (EU)
Nkwupụta nzuzo (EU)
ịdọ aka ná ntị
ỊNỌTỤ ỤZỌ NKE AKWỤKWỌ
Ịnweta ọnụ ọgụgụ
NGỌ NKE GRAY
MGBE ECHICHE ECHICHE
IKE NDỊ OBI NA-ECHICHE